G FATT အသံ အတိုင်း တုပပြီး သီချင်းဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ နေတိုး ရဲ့ စွမ်းရည် ကို ချီးကျူး ခဲ့ တဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ G FATTရဲ့ဗီဒီယို… – GaMone Media
Homepage / Celebrity / G FATT အသံ အတိုင်း တုပပြီး သီချင်းဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ နေတိုး ရဲ့ စွမ်းရည် ကို ချီးကျူး ခဲ့ တဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ G FATTရဲ့ဗီဒီယို…
G FATT အသံ အတိုင်း တုပပြီး သီချင်းဆိုပြ ခဲ့ တဲ့ နေတိုး ရဲ့ စွမ်းရည် ကို ချီးကျူး ခဲ့ တဲ့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ G FATTရဲ့ဗီဒီယို…
အနုပညာလောကရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးသူ တွေဖြစ်ကြတဲ့ နေတိုးနဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။… နေတိုးကလည်း ရုပ်ရှင်လောကမှာ အကယ်ဒမီဆုတွေများစွာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသား တစ်လက်ဖြစ်သလို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကလည်း ဂီတလောက မှာ မှတ်တိုင်တွေများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်၊ မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။… စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ နေတိုးတို့က ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ အချို့မှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ကောင်းကင်မရှိတဲ့ကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ အတူတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။…
မနေ့က ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက်နေ့မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နဲ့ နေတိုးတို့က Samsung Galaxy S21 Series 5G Launch ပွဲကို အတူတူတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။… ထိုပွဲမှာ နေတိုးက သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုနဲ့ G Fatt အသံ အတိုင်းတုပပြီး သီချင်း ဆိုပြခဲ့တာကြောင့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က နေတိုးကို စနောက်ခဲ့ရတာကို အခုလိုမျိုးပဲ တွေ့ရပါတယ်။….
အႏုပညာေလာကရဲ႕ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ နာမည္ႀကီးသူ ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေနတိုးနဲ႔ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုယ္စီ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။… ေနတိုးကလည္း ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ အကယ္ဒမီဆုေတြမ်ားစြာ ရရွိထားတဲ့ မင္းသား တစ္လက္ျဖစ္သလို စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ကလည္း ဂီတေလာက မွာ မွတ္တိုင္ေတြမ်ားစြာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အဆိုေတာ္၊ မင္းသားတစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။… စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္နဲ႔ ေနတိုးတို႔က ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ အခ်ိဳ႕မွာ အတူတူတြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ေကာင္းကင္မရွိတဲ့ၾကယ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ အတူတူတြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။…
မေန႔က ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔မွာေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ နဲ႔ ေနတိုးတို႔က Samsung Galaxy S21 Series 5G Launch ပြဲကို အတူတူတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။… ထိုပြဲမွာ ေနတိုးက သူ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းတစ္ခုနဲ႔ G Fatt အသံ အတိုင္းတုပၿပီး သီခ်င္း ဆိုျပခဲ့တာေၾကာင့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္က ေနတိုးကို စေနာက္ခဲ့ရတာကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။….
Previous post ကိုယ်ကျပ် ဖက်ရှင် အလန်းစားလေး နဲ့ တစ်ပုံချင်း စီတိုင်း မှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေ ပေါ်လွင်နေ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Next post အရမ်း ကို လန်းလွန်း လို့ မောင်လေးတွေ အသဲစွဲ ဖြစ်နေ တဲ့ မမ J NAW ရဲ့ အကြမ်းစား ပုံများ